Essential Guide For B2B Marketing 2020 | B2B Owner's Handbook Myanmar
La Min Phyu Phyu is the Content Strategist at B360 Digital. She’s an expert in inbound marketing and lead generation.
ထိရောက်တဲ့ Marketing တခု ဆိုတာ ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ Marketing တစ်ခု ဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်က ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ Audience ကို ရွေးချယ်ချမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Target Audience ကို သေချာမရွေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေ၊ ကြော်ငြာတွေက မဆိုင်တဲ့သူတွေဆီ ရောက်သွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Marketing ကအလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
Target Audience တွေ အမျိုးအစားများစွာ ရှိကြပေမယ့် ခြုံငုံပြီးခွဲမယ်ဆိုရင် Individual Consumer နဲ့ Business ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ Business တွေကို Marketing လုပ်ရတာက Individual Consumer တွေကို Marketing လုပ်ရတာထက် အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုံးဝကို ကွဲပြားတဲ့ B2B Marketing နည်းလမ်းတွေက သီးသန့်ရှိနေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ စာဖတ်သူအနေနဲ့ B2B Marketing အကြောင်း၊ ထိရောက်တဲ့ B2B Marketing နည်းဗျူဟာတွေကို ဘယ်လို ချမှတ်မလဲ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Audience ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ စတဲ့ B2B Marketing နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိဖို့လိုအပ်တာတွေကို ကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
B2B နဲ့ B2C Marketing ကွာခြားချက်
B2B နဲ့ B2C Marketing နှစ်ခုဟာ Audicence အမျိုးအစား၊ Audience တွေကို ဘယ်လို Communicate လုပ်မလဲ စတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာ၊ အသုံးချပုံတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွာခြားသွားပါတယ်။
B2B Marketing ဆိုတာ Organization ဒါမှမဟုတ် Organization တစ်ခုအတွင်း Decision Makers တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အဓိကထားပြီး Marketing ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ B2B Marketing မှာ အဓိက Target ထားရတာကတော့ Organization တွေပဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
B2B Business ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲ?
– HubSpot လိုမျိုး Marketing, Sales, Service & CRM Softwares တွေကို Business တွေအတွက် Target ထားပြီး ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုး
– ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Machinery ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုး
ဒီလို B2B Business Type မျိုးတွေအနေနဲ့ လူတိုင်းကို Target ထား ကြေညာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Business, Organization တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထား ကြေညာတဲ့ Account-based Marketing(ABM) လိုမျိုး B2B Markeing Strategy တွေအသုံးချသွားသင့်ပါတယ်။
B2C Business တွေဖြစ်တဲ့
– အစားအသောက်နဲ့ အဝတ်အထည်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုး
– အလှကုန်နှင့် ဆေးဝါးရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုး
ဒီလို B2C Business တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် သေချာပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ Buyer Personas များအပေါ်အခြေခံပြီး Creative Marketing Solution များကို အသုံးချသွားသင့်ပါတယ်။
Business Type ပေါ်မူတည်ပြီး Customer Behaviors ကွားခြားပုံများကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားမှာ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
B2B Marketing မှာ အဓိကကျတာ Audicence ပါ။ B2B နဲ့ B2C Marketing နှစ်ခုက ကွဲပြားခြားနားကြသလို B2B Marketing တိုင်းကလည်း တထပ်တည်းတူညီနေကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Audience တွေဆီ လက်လှမ်းမီရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် B2B Marketing နည်းဗျူဟာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
1. B2B Digital Markteting
B2B ပဲဖြစ်ဖြစ် B2C ပဲဖြစ်ဖြစ် Digital Presence ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ Paid ads, SEO, Website စတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ B2B လုပ်ငန်း အွန်လိုင်းရှိနေတဲ့ နေရာမှန်သမျှ Digital Presence မှာပါဝင်ပါတယ်။ B2B Digital Marketing နည်းဗျူဟာကို ပိုအားကောင်းစေပြီး လက်တွေ့ အသုံးချရလို့ရမယ့် Tactics တွေကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Target Audience ကိုသတ်မှတ်ပါ
စနစ်ကျတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုရေးဆွဲမယ်ဆိုရင် Target Audience ဒါမှမဟုတ် Buyer Persona ကနေ စတင်ရပါတယ်။ Buyer Persona မှာ Demographic (ကိုယ်ရေးအချက်အလက် – မွေးနေ့၊ မိသားစုဝင်၊ နေရပ်လိပ်စာ … ) နဲ့ Psychographic (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက် – ရည်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်၊ ခံယူချက် … ) စတဲ့ Information တွေပါဝင်ပြီး ဒီ Info တွေကတဆင့် Marketing Activity တွေပြုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Content တွေနဲ့ Digital Material တွေကို လက်ခံနားလည်နိုင်မယ့် မှန်ကန်တဲ့ Audience တွေဆီရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Right Eyes Right Ears ဖြစ်မှသာ ကိုယ့်ရဲ့ Resources တွေ Waste မဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Website တခုဆောက်ပါ
ဒုတိယအနေနဲ့ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး Engaging ဖြစ်တဲ့ Website တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင် Digital Marketing က ထင်သလောက် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Buyer တွေရဲ့ (၈၀)% က Purchase မလုပ်ခင်မှာ Website တွေကို ဝင်ကြည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန် B2B Sales Cycle တစ်ခုမှာ Gatekeepers, Decision Maker, Review ရေးပေးသူတွေ ပါဝင်တာကြောင့် Website တွေက Influencers တွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service တွေအကြောင်း Share ရလွယ်ကူမယ့် နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Digital Presence ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ Website, Social Media တွေက အချက်အလက်ပြည့်စုံရုံ၊ Engaging ဖြစ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါ။ ရှာဖွေရလွယ်ကူ (Discoverable) ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Discoverable ဖြစ်ဖို့ On-page SEO နဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ SEO ဗျူဟာတွေကို အသုံးချလို့ရပါတယ်။ ဒီနည်းဗျူဟာတွေမှာ မြင်ရတဲ့အရာ (ပုံ၊ စာ၊ ဗီဒီယို၊ ဒီဇိုင်း)တွေကအစ မမြင်နိုင်တဲ့အရာ (Site အမြန်နှုန်း) အထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ External Linking နဲ့ Social Sharing တို့လို Off-page SEO နည်းလမ်းတွေကလည်း ဒီနေရာမှာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
PPC Campaign တွေ Run ပါ
နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Content ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို Search Engines, Advertising Platform တွေက တဆင့် Audience အသစ်တွေဆီရောက်အောင် Pay-Per-Click (PPC) နဲ့ကြော်ငြာပါ။ ဒီနေရာမှာ Product/Service တစ်ခုတည်းကိုပဲ PPC နဲ့ ကြော်ငြာတာထက် Brand Personality, Blog, Social Media Content, Company Tagline တွေအတွက် PPC Investment ကို ထပ်ချဲ့ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Paid Ads တွေကနေ ROI ပြန်ရဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက
(၁) Buyer Persona ကို အသုံးချနိုင်အောင်လုပ်ပါ
(၂) Buyer Persona နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Content တွေကိုပဲ Boost လုပ်ပါ
ဥပမာ – Customer အသစ်တစ်ယောက်က ကိုယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Product အတိုင်း အတိအကျလိုက်ရှာနေဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေ အင်မတန် နည်းပါတယ်။ Customer အသစ်တွေက တည်နေရာ ဒါမှမဟုတ် Feature ကို အခြေခံတဲ့ Solution တွေကိုသာ ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်။ Potential Customer အရေအတွက်များများဆီကို Reach ဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Brand, Product/Service တွေကို Promote လုပ်ဖို့ပဲ Target ထားပြီး Paid Ads တွေကို Run သင့်ပါတယ်။
2.	B2B Email Marketing
Email Marketing ဆိုတာ B2B Customer တွေအတွက်ရော B2B Customer တွေအတွက်ပါ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ B2B Marketer တွေရဲ့ (၉၃)% ခန့်က Emial အသုံးပြုကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က Email မသုံးဘူးဆိုရင် မဖြစ်မနေ စမ်းသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ Email ကနေ Subscriber တွေကို Lead တွေအဖြစ်၊ ဒီကတဆင့် Customer တွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
B2C Customer တွေက စိတ်ခံစားချက်၊ ဖျော်ဖြေရေးတို့ကို ပိုပြီးနှစ်သက်ကြပေမယ့် B2B Customer တွေကတော့ Logic ကျပြီး Positive ROI ရမယ့်နည်းလမ်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service က သူတို့လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းသာ သူတို့အတွေးထဲမှာရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Email Marketing ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Business Customer တွေအတွက် သင့်တော်ပြီး သူတို့အကျိုးစီးပွား(အချိန်၊ ငွေ၊ Resources)တွေကိုသာ အဓိက Focus လုပ်သင့်ပါတယ်။
Email Marketing က ကိုယ့် Brand Content တွေကို Share ရာမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါ။ (၈၃)% သော B2B လုပ်ငန်းတွေက Email Newsletter တွေကို သူတိုရဲ့ Content Marketing ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး B2B Marketer တွေရဲ့ (၄၀)% က သူတို့ရဲ့ Content Marketing အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဒီ Newsletter တွေက အရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Email တွေကို အများကြီးဆက်တိုက် ပို့မယ့်အစား ထိရောက်ပြီးနည်းဗျူဟာကျတဲ့ Marketing Email မျိုးကို သေချာ စီစဉ်ပြီး ပို့သင့်ပါတယ်။
B2B Email Marketing အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
– စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Subject Line – Email Subject Line တွေကို Netflix Trailer တွေလို စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကို ကြည့်ချင်လာအောင် နှစ်မိနစ်စာ ဗီဒီယိုကနေ ဆွဲခေါ်ရပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ Email Subject Line တွေက ပျင်းစရာကောင်းနေရင် ကိုယ့် Email တစ်ခုလုံးကို ဝင်ကြည့်သွားနိုင်ချေက အတော်ကို နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် Email ရေးတဲ့အခါ Subject Line တွေအတွက် အချိန်ပေးပြီး ရေးဖို့လိုပါတယ်။
– Email တိုင်းမှာ Call-To-Action (CTA) တစ်ခုပဲ ထည့်ပါ – ကိုယ့်ရဲ့ Email တွေထဲက CTA တွေကို သတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။ တချို့မှာ CTA သုံးလေးခု ပါတတ်ပြီး တချို့ Email တွေမှာ CTA ဆယ်ခုလောက်အထိ ပါနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက Email ဖတ်သူကို ဘယ်ဟာကို အရင်နှိပ်ရမှန်းမခွဲတတ်လောက်အောင် မူးနောက်သွားစေပြီး ဘာ Action မှမလုပ်နိုင်ဘဲ ပြန်ထွက်သွားဖို့ အခွင့်အရေးများစေပါတယ်။ ဒီလို အမှားမျိုး လုံးဝမလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်။ Email တစ်ခုမှာ CTA တစ်ခုပဲထည့်ပြီး Email ထဲမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ အဓိက လုပ်ရမယ့် Action ကို အာရုံစိုက်ခို်ငးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
– အသင့်တော်ဆုံး Audience တွေဆီရောက်ရှိဖို့ Email Segment ခွဲပါ – ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ Email တိုင်းက ကိုယ့် Audience အယောက်တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီနေတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ Subscriber တွေက Buyer Journey အဆင့်အမျိုးမျိုးမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး တယောက်ချင်းစီက ရှာဖွေနေတဲ့ Solution တွေကလည်း မတူညီကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Emial List Segmentation ပေါ်လာတာပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ Audience နဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာ ပိုအဆင်ပြေစေရုံသာမပဲ ပိုပြီး Personal ဖြစ်တယ် (ဖတ်တဲ့သူအတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတယ်)လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ Email ဖတ်သူတွေက အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Email တွေကို ပိုမျှော်လင့်ကြပါတယ်။
– Email Design တွေကို Responsive ဖြစ်စေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ – Email အသုံးပြုသူ (၈၀)% က ဖုန်းတွေကနေ Email စစ်လေ့ရှိကြပြီး စာတွေပုံတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် မပြတဲ့ Email တွေကို ဖျက်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Email Design တွေကို Desktop မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် Device မှာမဆို မှန်မှန်ကန်ကန်ပြဖို့ (Responsive ဖြစ်ဖို့) သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
– Cold Email တွေပို့ဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ – Cold Email တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးတတ်မယ်ဆိုရင် Customer အသစ်တွေကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3.	B2B Content Marketing
B2B Customer တွေက ကျွမ်းကျင်မှု၊ Logic တွေကို အဓိကထားပြီး Educate လုပ်ပေးတာကို လိုလားကြပါတယ်။ B2B Customer တွေရဲ့ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို Content Marketing ကသာ အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာပါ။
ပုံမှန် PR (Public Relation) Marketing က Promotional Material တွေနဲ့ Consumer တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် Content Marketing ကတော့ Value ပေးနိုင်တဲ့ Info တွေနဲ့ Consumer တွေတကယ်ရှာဖွေနေတာတွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ Customer တွေရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေကို ခန့်မှန်းပေးခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ Content နဲ့ Website ကိုရှာတွေ့စေဖို့ အထောက်အကူပြုခြင်း စတဲ့ SEO Effort တွေကို Content Marketing ကအထောက်အပံ့ပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
အချက်အလက်တွေအရ Decision Maker တွေရဲ့ (၈၀)% က ကြော်ငြာတစ်ခုထက်စာရင် ဆောင်းပါးတစ်ခုကနေ Info ရလိုက်တာကို ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Content ထဲမှာ Traditional Marketing လို ကြော်ငြာမယ့်အစား Cutomer တွေ အမှန်တကယ် Value ရသွားမယ့် Resource တွေကို ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
B2B Buyer Journey နဲ့ B2C Buyer Journey နဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားလို့ (B2C Buyer Journey မှာ Sales Cycle ပိုတိုပြီး Decision Maker ပိုနည်းပါတယ်) B2B အတွက်ရေးရတဲ့ Content တွေက Consumer တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်မြင်နေကြ Content တွေနဲ့ ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။
Content တွေကို စမလုပ်ခင် Business Blog ဒါမှမဟုတ် Page တစ်ခုကို အရင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Blog/Page မှာ Visitors/Follower အရေအတွက် နည်းမှာကို စိတ်မပူပါနဲ့။ ကိုယ်က အမှန်တကယ် Value ရမယ့် Content မျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် Visitors/Follower အရေအတွက်တိုးလာတာ မြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Blog/Page ကို ကိုယ့် Business Website အတွက် Subscriber တွေ အဓိကရလာမယ့် Home-Base အဖြစ် ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။
4.	B2B Social Media Marketing
B2B Buyer (၇၅)% နဲ့ C-Suite Executive (၈၄)% က Purchase လုပ်တိုင်း Social Media ကို သုံးကြတယ်ဆိုတာသိပါသလား။ Social Media ဆိုတာ B2C လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပဲ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်တာ အမှန်ပါပဲ။
B2B ကုမ္ပဏီအများစုက Social Media Marketing လုပ်တဲ့အခါ အတော်လေးကို Struggle လုပ်ရပါတယ်။ B2B လုပ်ငန်းတွေမှာ Sales Cycle ပိုရှည်ပြီး Chain of Command (ရာထူးအဆင့်အဆင့်ကိုဖြတ်သန်းရတာ) ပိုများလို့ Social Media ပေါ်မှာ Individual Customer တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာထက် Business Customer တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာ ပိုပြီး ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
အမှန်အတို်ငးပြောရမယ်ဆိုရင် Social Media Marketing လုပ်တာက Lead တွေများများရဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် Customer ရဲ့ ​Buyer Journey ကို စတင်ဖို့ Social Media Marketing ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Brand Awareness နဲ့ Online Personality တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရာမှာ Social Media က အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Email Marketing လိုပဲ Content တွေ Share ဖို့ ၊ ကိုယ့် Brand ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ကို ပြသဖို့ Social Media က အရမ်းထိရောက်တဲ့ ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Social Media Account တွေကနေ Convert လုပ်နိုင်တဲ့ အကြိမ်ရေက Content, Email Marketing တို့ထက် ပိုနည်းနို်ငပေမယ့် Social Media က Followerတွေကနေ ဘယ်အချိန်မှာ Lead တွေ၊ Customer တွေအဖြစ်ကို ပြောင်းသွားနိုင်မလဲ မသိနို်ငတာဖြစ်လို့ Social Media Marketing ကလည်း B2B Marketing မှာ တစိတ်တပိုင်းအရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။
5.	B2B SMS Marketing
AT&T က လုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနအရ လုပ်ငန်းရှင် (၈၅)% က ဖုန်းကောလ်တွေနဲ့ Email တွေထက် SMS တွေကို ပိုနှစ်သက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Mobile Marketing Research အရ SMS တွေကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်ချေက (၉၈)% အထိ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် SMS Marketing နည်းဗျူဟာတစ်ခုကို ရေးဆွဲဖို့တွေဝေမနေပါနဲ့။
6.	Messenger Marketing
Messenger Marketing က B2B Sector မှာ ပေါ်ပျူလာဖြစ်ပြီးသားပါ။ Messenger တွေကိုဖွင့်ကြည့်နိုင်ချေက (၈၀)% နဲ့ Button ကို နှိပ်သွားနိုင်တဲ့အလားအလာက (၂၀)% အထိရှိပါတယ်။ Messenger ကို ဘာရွေးရမလဲမသိရင် Facebook Messenger ကနေ စသုံးကြည့်ပါ။ Facebook Messenger က လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားပါတယ်။
Facebook Messenger မှာ Facebook Post တွေအတွက် Auto Response, Website အတွက် Chat Widget တွေလို Marketing Campaign အမြောက်အများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
B2B Marketing နည်းဗျူဟာတွေ အများကြီးရှိသေးပေမယ့်လည်း Marketing ဆိုတာ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘော ရှိတာကြောင့် တခါတည်း ပုံသေပြောလိုက်လို့မရပါဘူး။ အဟောင်းတွေ ခေတ်ကုန်သွားပြီး အသစ်အသစ်တွေ အမြဲတမ်းအစားထိုးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကအမြဲတမ်း ခေတ်ကို အမီလိုက်ပြီး လေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။
B2B Marketing ဘယ်လို ချမှတ်မလဲ
1.Vision တစ်ခု အရင်တည်ဆောက်ပါ
2.Target Market ကို သတ်မှတ်ပါ
3.Marketing Tactics တွေနဲ့ Channel တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
4.Campaign ကို စတင်ပါ
အောင်မြင်တဲ့ B2B နည်းဗျူဟာတစ်ခု မှာ အသေးစိတ်တိကျတဲ့ Plan လိုတယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဖို့လိုပါတယ်။ B2B Marketing နည်းဗျူဟာတစ်ခု အောင်မြင်စေဖို့ Step-by-step Guide တစ်ခုကို လမ်းညွှန်ပေးသွားပါမယ်။
1. Vision တခု အရင်တည်ဆောက်ပါ
ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှ မချရသေးခင် တိုင်းတာလို့ရတဲ့ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်တွေကို အရင် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဒီလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်တွေကို ရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် Marketing နည်းဗျူဟာကို ချမှတ်သင့်ပါတယ်။ Vision တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ နည်းဗျူဟာကျစေဖို့ ဒီမေးခွန်းတွေကိုအရင် ဖြေကြည့်ပါ။
• Target Audience က ဘယ်သူတွေလဲ
• ကိုယ့်ရဲ့ Audience နဲ့ ဘယ်မှာ Engage လုပ်မှာလဲ
• Marketing Campaign တွေကို ဘယ်သူက လုပ်မှာလဲ
• ဘာ Tools တွေကို အသုံးပြုမှာလဲ
• Engagement ကို ဘယ်လိုတက်အောင်လုပ်မှာလဲ
• ကိုယ့်ရဲ့ Success ကို ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ
2. Target Market ကို သတ်မှတ်ပါ
Products ဒါမှမဟုတ် Service တွေကို ရောင်းချတဲ့အခါ ကိုယ့် Customer တွေရဲ့ သီးခြားလိုအပ်ချက်၊ ပြဿနာတွေကို Target ထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် Audience ကို သတ်မှတ်တဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက် တိကျဖို့လိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Product/Service တွေကို လိုအပ်နေတဲ့၊ ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေဆီကို အရောက်သွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Buyer Persona ဆွဲနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့် Client တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ အဓိက Pain Point တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းပါ။ ကိုယ့် Audience တွေအကြောင်း တိတိကျကျပိုသိနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ Loyal Buyer အချို့ကို အင်တာဗျူးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
3. Marketing Tactics တွေနဲ့ Channel တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
နောက်တဆင့်ကတော့ ကိုယ့် Client တွေဆီကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို Reach လုပ်မလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်တာပါ။ ဒီအဆင့်ကို ပိုလွယ်သွားအောင် အောက်ကမေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုကြည့်ပါ။
• ကိုယ့်ရဲ့ Client တွေက လိုင်းသုံးရင် ဘယ်မှာ အချိန်ကုန်လေ့ရှိကြလဲ
• ဘယ်လို Event တွေကို တက်ကြလဲ
• သူတို့သုံးကြတဲ့ Social Media Platform တွေက ဘာတွေလဲ
• ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေပြီးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး Marketing Channel တွေနဲ့ နည်းဗျူဟာကို ရွေးချယ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ Marketing နည်းဗျူဟာအောင်မြင်စေဖို့ Professional တွေနဲ့ ထပ်ပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနို်ငပါတယ်။
4. Campaign ကို စတင်ပါ
ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ Plan ထွက်လာပြီး အကောင်းဆုံး နည်းဗျူဟာကို ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်ရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အလားအလာရှိတဲ့ Client တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ Team Member တွေကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခိုင်းပါ။
မားကတ်တင်းအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့နည်းဗျူဟာမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့က အလွန်အရေးပါပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ Audience ကို Target ထားဖို့ကိုလည်း မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိကလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ Business Partner ဖြစ်လာမယ့်သူတွေဆီကို Information တွေပေးနိုင်ဖို့ Message တွေကို ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
B2B Marketing Campaign တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် Conversational ဖြစ်ဖို့လိုပြီး သင့်တော် အဆက်အစပ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ B2B Marketing နည်းဗျူဟာတွေကို အစဉ်အမြဲတိုးတက်နေဖို့ဆိုရင် ထွက်လာတဲ့ Result တွေကို တိုင်းတာပြီး Conclusion ချဖို့မမေ့ပါနဲ့။
B2B ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Task တွေဖြစ်တဲ့ Email Marketing, Campaign လုပ်ခြင်း, Landing Page ပြုလုပ်ခြင်း၊ Lead Nurturing စတဲ့အလုပ်တွေကို Solution တခုတည်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ Marketing Automation Platform တွေက လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
B2B Marketing Automation Platform တွေမှာ များသောအားဖြင့် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Feature တွေပါဝင်ပါတယ်။
– Website Visitor တွေကို Track လုပ်ခြင်း
– Lead Capture, Scoring & Nurturing
– တစ်နေရာတည်းကနေ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ Marketing Database
– Data Reporting & Analysis
B2B အတွက် Inbound Marketing နည်းဗျူဟာတစ်ခု ရေးဆွဲရတာ ခက်ခဲတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးဆွဲထားတဲ့ နည်းဗျူဟာကို Detailed Plan မသွားခင်မှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို အရင်ရှာဖွေရပါမယ်။
“ဒီ Marketing ကနေ ဘာကိုရချင်တာလဲ”
B2B လုပ်ငန်းအများစုအတွက် ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေက Lead များများရပြီး Customer တွေ အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့ပါ။ ဒီရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်မီဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့နည်းဗျူဟာကို အထောက်အကူဖြစ်မယ့် မှန်ကန်တဲ့ Marketing Platform တစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
Marketing Platform တွေက Social Media နဲ့ Website ပေါ်က Traffic တွေကို Lead အဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေအဖြစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Analytics နဲ့ Result တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး Campaign တွေကို Optimize ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ HubSpot လို Platform တွေမှာတော့ အသုံးပြုသူတွေကို Search Engine Optimization (SEO), Blogging နဲ့ Content Management System (CMS) စတဲ့နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့ပါ အထောက်အကူပြုနို်ငပါတယ်။ Facebook, LinkedIn, Twitter တို့လို Social Media Account တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ Lead Capturing အတွက် မှန်ကန်တဲ့ Marketing Platform ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Lead တွေပိုရအောင်၊ Customer တွေဖြစ်လာအောင် Nurture လုပ်နိုင်ပြီး Income ကို မြှင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Check your marketing health now
This Guide will offer inspiration to your clients or prospects who are feeling the itch to refresh their marketing campaigns but unsure where to begin.